ဒီ Serie ကိုမှတ်မှတ်ရရ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကလားမသိဘူး ကျွန်တော် Iflix မှာကြည့်ပြီးတော့ သဘောကျသွားခဲ့တာ … Sci-Fi ကိုကြိုက်တဲ့ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အဲ့တုန်းကရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျဆိုသလိုပဲ ဒီ Serie ကိုစကြည့်ကြည့်ပြီးချင်းပဲ အတော်ကြိုက်သွားတယ် …. ဒါပေမယ့် Season4ပြီးတော့ တခြား Season တွေမရှိတော့တာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့
သူငယ်ချင်းတို့ထဲမှာလည်း ကျွန်တော့်လို SciFi, Adventure ကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဆိုတော့ …. သူငယ်ချင်းတို့ကို ၂၀၁၄ ကထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခု Season ၆ ရောက်တဲ့အထိ အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ် … လာမယ့် မေလကျရင်လည်း season7ထွက်ဦးမယ့် IMDB ရော Rotten Tomato ရောမှာ Rating ကောင်းကောင်းရနေတဲ့ Sci-FI အမျိုးအစား Serie လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ် ။ The 100 ဆိုတဲ့ Series လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ ။
ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလွန်ကဲပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့လူသားတွေအချင်းချင်း နျူတိုက်ပွဲတွေဆင်နွဲရင်းကနေ ကမ္ဘာကြီးဟာရေဒီယိုသတ္တုကြွဓာတ်ရောင်ခြည်တွေသင့်ကာ သက်ရှိတွေသေကြေပျက်စီးကြပြီး နေထိုင်လို့မရတော့လောက်အောင်အထိ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းကြီးကြုံခဲ့တယ် ။ အဲ ဒါပေမယ့်လူသားတွေအနေနဲ့ အာကာသထဲထွက်ပြေးဖို့ဆိုတဲ့ အဖြေရှာတွေ့ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုတွေ ပျက်ပြယ်သွားတဲ့အခါမှ ပြန်လာကြမယ်ဆိုပြီး နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ လူသားတွေဟာ အာကာသစခန်းတွေတည်ဆောက်ပြီး အာကာသထဲလွတ်မြောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
၉၇ နှစ်အကြာကိုရောက်သွားတဲ့အခါ သူတို့မှီတည်နေထိုင်ရတဲ့ အာသာကစခန်းဆိုတာကလည်း သူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေရှိလာခဲ့တာပေါ့။ ဆိုတော့ကာ လူတွေရဲ့ အဓိကရှင်သန်မှီဝဲရာဖြစ်တဲ့ အစားအစာ အောက်ဆီဂျင် (အဓိကကတော့ အောက်ဆီဂျင်ပေါ့) သက်တမ်းပိုခံဖို့အရေးမှာ ရာဇဝတ်သားဆိုတဲ့ သက်ရှိတွေက အစတေးခံ စဖြစ်လာကြတော့တာပေါ့ ။ ဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲ ရာဇဝတ်သား ၁၀၀ ကို အာကာသစခန်းကနေ လူဦးရေလျော့ချဖို့ဖြစ်လာရော … အဲ့ ဒါပေမယ့် သူတို့လျော့ချမယ့် ရာဇဝတ်သား ၁၀၀ က လူငယ်တွေဖြစ်နေတော့ တစ်နည်းတစ်ဖုံစဥ်းစားရင်းနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း အာကာသထဲကိုစွန့်ပစ်မယ့်အစား လူတွေနေထိုင်လို့ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို စွန့်စားမှုအနေနဲ့ ပြန်လွှတ်လိုက်ရင် အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာရကောင်းရဲ့ ဆိုပြီး ရာဇဝတ်သား လူငယ် ၁၀၀ ကို ကမ္ဘာကို ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ ………. ဒီ The 100 ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းစရောဗျာ …..
သူတို့ကိုသွားဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တာက တကယ်အချိန်တန်လို့လား. တခြားရောဘာအကြောင်းတွေရှိသေးလဲ. အဲဒီဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၁၀၀ ကရောဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေလဲ . သူတို့ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်သွားရဲ့လား. ဒါမှမဟုတ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမယ့် Mystery , Sci-FI အမျိုးအစား Serie လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
IMDB လဲ 7.7 အထိရရှိထားတာမို့ TV Serie ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်လို အကြံပေးလိုက်ပါတယ် ။
( နောက်ပိုင်း Season တွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်လို့….. )
Genres – Drama, Mystery, Sci-Fi
Season7waiting..❤️
Season5ကိုတင်ပေးပါအုံး
ပူးကေလးMay 12, 2020Reply
Zaw 5နဲ႔6 ကၾကည့္ၿပီးၿပီလို႔လား
ပူးကေလးMay 8, 2020Reply
ပူးကေလးMay 11, 2020Reply
Season5please ျၾကည့္ခ်င္ေနၿပီး
ပူးကေလးApril 26, 2020Reply
Season 4က စၿပီး မ႐ွိေတာ့ဘူးလား please
S3 ဆက်တင်ပေးအုံးနော်adminရေ ကြည့်လက်စကြီးဖြစ်နေပြီ
ပူးကေလးMay 15, 2020Reply
ဆရာတို့ mb နဲနဲနဲ့ တင်ပေးလို့မရလား Down ဆွဲရတာလိုင်းမကောင်းတော့ ကြာလို့ပါဗျ တင်ပေးတာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတ,်ဗျ
အဲ့ထက်နည်းရင် တော်တော်ဝါးသွားမှာမလို့ပါ ဘရို ဒီ size လောက်ကအနေတော်ပဲခင်ဗျ gdrive နဲ့ ဆွဲကြည့်ပါလား အဲ့တာကမြန်တယ် ဘရို
အားေပးတဲ့ပရိတ္သတ္ကုိ အေလးထား ဆက္ဆံၿပီး ျပန္ေျဖေပးတာ
GC Admin ေတြပဲရွိတယ္
Season4က စၿပီး မ႐ွိေတာ့ဘူးလား please
ပူးကေလးMay 13, 2020Reply
တေန႔ကိုဆယ္ခါေလာက္ဝင္ၾကည့္တယ္ Season5တင္ေနၿပီးလား သိခ်င္လို႔ တင္ေပးပါ please
Season5please … Thank you …❤❤
Season5please .. ❤??????????? Season5..The 100 please ?
Season5please ..waiting ????❤ Th 100 ?????
season ၅ က နှစ်ရက်လောက်စောင့်ပေးပါ အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးနေပါတယ်
ကြာနေပီ Admin ‌ရေ
Thankyou so much GC ❤
min min ေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေ
min min ရေ season5ကို ကြည့်ချင်လွန်းလှပါပီ..မျှော်နေပါတယ်ေနာ်
Season 5.6 တင္ေပးပါေနာ္
Season56 7လေးတင်ပေးပါဦး
Season5မရသေးဘူးလား မျော်နေတယ်နော်
season5ကနည်းနည်းကြာနေပီလေ Admin
ပူးကေလးMay 18, 2020Reply
Season6please အလုပ္မရွိဘူး ဇာတ္ကားပဲ ထိုင္ၾကည့္
Season6TQ Par 😁
Season7 ep2 စောင့်နေတယ်လို့
ကိုကိုMay 28, 2020Reply
Season 7လေး admim ep1 ပဲရသေးတယ်
စိုင်းခမ်းခေါင်May 28, 2020Reply
se7ထပ်တင်ပေးပါဗျိုး
FHD နဲ့တင်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ် Thank you
S7EP6လေးတင်ပေးပါဦး ထွက်နေတာ ကြာပြီ
အောင်တေဇJune 29, 2020Reply
Season 1 link ပြန်ချိတ်ပေးပါ
Season4Ep7 ကနေ Ep13 ထိ download link မရတော့လို့ link လေးပြန်ချိတ်ပေးလို့ရမလားဗျ.
The 100 Season မ်ား လင့္ေသေနပါတယ္